Waxaan Guurnay Marti Sharaf ... Waxaad Doonaysaa Inaad Si Wanaagsan U Socoto | Martech Zone
Daacad baan u noqon doonaa inaan si aan caadi aheyn u niyad jabay hadda. Goorma la qabsaday WordPress martigelinta suuqa ku dhacay qaar ka mid ah asxaabteyda ayaa furay shirkadooda, farxad intaas ka sii badan maanan kari karin. Ka wakaalad ahaan, waan ka daalay inaan la galo arin ka dib arin la xiriirta martigaliyayaasha websaydhka oo noo gudbin doona wixii dhibaato ah ee WordPress ah. Iyadoo la adeegsanayo martigelinta WordPress, martigeliyahayagu wuxuu taageeray WordPress, wuxuu ku hagaajiyay xawaare, wuxuuna lahaa astaamo u gaar ah maareynta dhammaan boggeena iyo dhammaan macaamiisheenna.
Waxaan si dhakhso leh ugu saxiixanay sidii shuraako oo aan boqolaal shirkadood u saxiixanay, iyagoo na siinaya waxoogaa dakhli ah oo ku xiran. Madax-xanuunkeena hay'ad ahaan wuu naga baxay - ugu dambayntii waxaan uheynay 24/7 taageero macaamiisheena iyo martigelin heer sare ah oo leh dhamaan gambaleelka iyo foorida. Taasi waxay jirtay illaa bil ama wax ka hor. Marti-geliyahayaga waxaa lagu marti-galiyay dhowr xarumood oo xarun xogeed ku hoos jirtay wax aan caadi ahayn taxane ah weeraradii burburka ahaa ee DDoS. Boggeena iyo dhamaanba macaamiisheenna macmiilku kor iyo hoos ayey u socdeen daqiiqad kasta ama wax la mid ah, sida muuqata, dhammaad ma leh barta.
Waan haynay laakiin waxaan bilaabay inaan ka xanaaqo isgaarsiin la'aanta. Macaamiishayadu dhammaantood way ina garaacayeen, waxna uma sheegi karno maxaa yeelay martigelintayadu waxba nooma sheegin. Ugu dambayntii waxaan la hadlay mid ka mid ah milkiileyaasha ku jira koox xirfadleyaal ah oo WordPress ah oo ku jira Facebook wuxuuna yidhi waxaan haystaa dhammaan gacmaha dusha sare waxayna ka shaqeynayaan sidii macaamiisha ay khusayso looga saari lahaa server-yada la bartilmaameedsaday. Whew… taasi wey fiicneed in la maqlo waxaanan labadaba ugu mahadnaqay shaqadiisa oo aan rajaynayey hijrada.
Taasi waa, ilaa aan ka haajirnay.
Markii boggayagu soo haajiray, wuxuu ku gurguurtay joogsi. Dhibaatooyin ayaan kala kulmay gelitaanka, rarka, ama wax badan oo aan ku sameeyo barta. Soo-booqdayaashaydu way cawdeen oo waxay ka gurguureen dhinacyada saddexaad waxay muujiyeen goobta oo istaag u dhow. Google Search Console waxay muujisay dhibaato aad u cad:
Waxaan soo galiyay muuqaalkan oo waxaan codsaday caawimaad fiiri adeegeyga arrimaha, anigoo ogeysiinaya inaan dhowaan haajiray. Ka dibna ciyaartii eedda ayaa bilaabatay.
Tan samayn maayo… waxay iiga gudbeen teknolojiyadda ilaa teknolojiyada kuwaas oo hadda sii wada garabka garbaha iyagoo isku dayaya inay dhibaatooyin ka helaan boggeyga. Xitaa iskuma dayaan inay ogaadaan inay tahay kaabayaashooda. Marka, waxaan sameeyay wixii geek kasta uu sameyn lahaa. Waan joojiyay daabicitaanki waxaanan hagaajiyay dhibaato kasta sida ay u tilmaameen… waxqabadka goobta waligoodna isma bedelin. Waxaa laga yaabaa inay xitaa akhriyaan maqaalkayga waxyaabaha saameynaya xawaaraha bartaada.
Waa tan waxa ay i sii mariyeen:
A Khalad PHP oo leh fiilo gaar ah markay samaysay API wac Waan curyaamiyey fiilada, wax isbeddel ah kuma imaan xawaaraha goobta.
Codsiga xigaa wuxuu i weydiinayay meesha aan ku arkay bogga oo gaabis ah. Marka waxaan u tilmaamay iyaga Xogta guurguuraha Google Webmaster oo waxay yiraahdeen taasi waxtar ma leh. Maya duh… Waxaan bilaabay inaan yara xanaaqo.
Waxay markaa sheegeen in aanan ku haysan shahaado SSL aniga Network Delivery Content. Tani waxay ahayd arrin cusub, waligay xitaa ma ogaan in CDN dhab ahaantii naafo tahay (ka hor iyo ka guuritaanka socdaalka). Marka waxaan rakibay an Shahaadada SSL wayna kiciyeen. Wax isbeddel ah kuma imaan xawaaraha goobta.
Waxay ii soo jeediyeen inaan isku daro Codsiyada JS iyo CSS. Mar labaad, tani waxay ahayd qaab isku mid ah tahriibka kahor laakiin waxaan idhi waa hagaag oo rakibay a JS iyo CSS plugin optimizer. Wax isbeddel ah kuma imaan xawaaraha goobta.
Waxay yiraahdeen waa inaan cadaadi sawirada. Laakiin, dabcan, iskama dhibayn inay arkaan inaan horey u jiray cadaadin sawirada.
Kadib waxaan helay fariin ah inay ku tijaabiyeen boggeyga labada server waana ay aheyd khaladkayga. Si aad u sax ahaato, "Macluumaadkan, waxaan awood u leenahay inaan aragno in uusan ahayn serverka ama culeyska serverka ee sababaya waqtiga culeyska dheer ee goobta." Marka hada waxaan ahay beenaale dhibaatadayduna waa… waxaan xasuustaa maalmahan kahor intaanan lashaqayn shirkad la rabay inay khabiiro ka noqoto WordPress.
Waxaan ka codsaday inay ii sheegaan waxa xiga ee aan isku dayi doono. Waxay igula taliyeen aniga kiraysato horumariye (Ma kaftamayo), taasi waxay ku shaqeyn laheyd dulucda, sheyga, iyo habeynta keydka. Marka, khubarada WordPress ee martigaliyahan iima sheegi karaan waxa qaldan, laakiin waxay rabaan inaan shaqaalaysiiyo inkasta oo aan bixinayo 2 illaa 3 jeer waxa celceliska celceliska shirkadda martigelisa.
Goobtu si tartiib tartiib ah ayey uga sii xumaaneysay, hadda wax soo saar Qalad 500 markaan isku dayayo inaan ku sameeyo waxyaabo fudud gudaha maamulka WordPress. Waxaan soo sheegayaa 500 khalad. Waxa xiga ee aan ogahay, degelkaygu wuu dhammaaday, waxaana lagu beddelay mawduuc cad oo dhammaan naafooyinku naafo yihiin. Hadda waxaan bilaabay inaan isticmaalo DHAMMAAN CAPS iyo calaamadaha la yaabka ee jawaabahayga. Boggeygu maahan wax hiwaayad ah, waa ganacsi… marka hoos u dhigista ma ahayn ikhtiyaar.
Ugu dambeyntiina, waxaan wacayaa qof ka mid ah shirkadda martigelinta ah waxaanan ka wadahadleynaa muddo dheer arrimaha. Halkan waa halka aan ku qarxinayo… ayuu taas qiray dhowr macmiil ayaa qabay arrimo la xiriira waxqabadka tan iyo markii ay ka soo haajireen iyaga oo ka fog server-yada ay weerareen ee DDoS. Runtii? Ma qiyaasi lahaa.
Ku noqo cillad bixinta… Waxaa la ii sheegay inaan rabo inaan u wareego a dhakhso DNS. Middi kalena middi ku dhufto gudcurka tan iyo markii aan horaba ku martigeliyey biriq soon maareeyaha DNS.
Wareeg buuxa… waan ku noqonay eedeynta plugins. Isla plugins-kii shaqeynayay ka hor hijrada. Waqtigan xaadirka ah aad ayaan u dhammeeyay. Qaar baan codsiyo u dhigay qaar Xirfadlayaasha WordPress iyaguna way ii tilmaamaan Flywheel.
Waxaan ku xiraa Flywheel yaa ii saxeexa a koontada imtixaanka bilaashka ah, ii haajiraan goobta, oo way socotaa oo waxay ku socotaa xawaare kulul. Iyo, niyad jab kale, waxay ku sameyneysaa qayb yar oo ka mid ah kharashka wixii aan ku bixinayey martidayadii hore.
Maxaan u Go aansaday inaan Tahriibno?
Soo haajirida dhammaan boggagayagu ma noqon doono wax lagu farxo. Go'aan kama aan gaadhin arrimaha waxqabadka awgood, waxaan u gaadhay arrimaha aaminaadda awgood. Shirkaddaydii ugu dambeysay ee martigalisay way iga lumisay maxaa yeelay waxay la'yihiin daacadnimada (walina way la'yihiin daacadnimada) si ay uqirtaan inay leeyihiin arrimo waxqabadyo waaweyn ah. Waan u dulqaadan lahaa inay runta ii sheegaan oo aan rajo ka bixiyo markay wax saxaan, laakiin uma dulqaadan karin iyaga oo farta ku fiiqaya.
Waa tan warbixinta Webmasterka maalmo kadib:
Waxaad isweydiin kartaa waxa dhici kara goorta Flywheel wuu weynaadaa it miyey ku dhalaysaa khibrad la mid ah? Mid ka mid ah waxyaabihii aan ku ogaaday hijradaan waxay ahayd in martidayadii hore aysan laheyn awoodo farsamo oo ay ku xakameyn karto waxqabadka koonto mid kale. Natiija ahaan, dhibaatadu xitaa ma noqon karto rakibideyda gabi ahaanba, waxay noqon kartaa qof kale oo ku soo boodaya ilaha ku jira serverka oo na wada keenaya.
Iyada oo barta si nabad ah loo shiday Flywheel, Waxaan rakibineynaa shahaadooyinkeena amniga isla markaana dib u soo nooleyneynaa bahalkii. Waxaan ka cudurdaaranayaa nuxur la'aanta toddobaadkan hore. Waad sharad geli kartaa inaan dib u habeyn ku sameyno waqti lumay!
Shaacinta: Hadda waxaan nahay shirkad Flywheel ah! Iyo Flywheel ayaa waxaa kugula taliyay WordPress!
Tags: flywheelmaaraynta wordpress martigelintaWordPressmarti gelinta wordpresswpengine
Blitz: Waxqabadka iyo Tijaabada Xamuulka ee daruuraha
Feb 1, 2016 markay ahayd 7:09 PM
Waxaan dareemayaa inaan la kulmay arrimo la mid ah qaar ka mid ah martigaliyayaasha boggeyga sidoo kale. Miyaad isweydiineysaa haddii ay ka sii baxayaan boggaga ay maamulaan ee WordPress ee martigelinaya isla halbeegyadii helayay weerarada DDoS? Isla gacan-ku-qaadis iyo eedeyn ciyaar illaa iyo ugu dambeyn la helo tiknoolajiyad sheegaysa inay aqoonsadeen qaar ka mid ah arrimaha server-ka ee ay ka shaqeynayaan. Ha aaminin inaan arin soo qabtay tan iyo markaas nasiib wanaag.
Feb 1, 2016 markay ahayd 8:03 PM
Waxaan u maleynayaa in dalabku u sareeyo barnaamijyadan la maareeyay. Nasiib darrose, sida adiga iyo aniguba aan ognahay… waxaa jira dad badan oo halkaas jooga oo "u maleeya inay yaqaaniin" oo dhab ahaan og waxa ka socda barnaamijyadan. Waxaan aaminsanahay inay soo qaban doonaan oo ay isticmaali doonaan nidaamyada dabagalka ee awooda u leh raadinta arrimaha. Si daacadnimo ah, dhacdadani waxay umuuqatay sidii iyagoo darbiyada uun tuuraya. Waxaan waayey kalsoonidii oo dhan.
Feb 1, 2016 markay ahayd 8:35 PM
Waxaan dareemayaa xanuunkaaga. Waxba kama xuma inaad ku dhex socotid tilmaamo dhib yar oo aan waxtar lahayn markii aad horay u ogayd inaysan ku caawin doonin.
Ma martigaliyahan kale ayaa ah meesha IonThree lagu martigaliyo? Oo ma inaan tixgelinno guuritaanka? Waxaan u maleynayaa inaan uun cusbooneysiinay.
Sidoo kale, waxaan kaa filan lahaa inaad ugu yeerto shirkada magac ahaan maadama aad leedahay macmiil ay marti ka yihiin iyaga iyo, sida aniga oo kale, waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan haddii ay leeyihiin arrimo aysan weli ka warqabin. Taasi waa ilaa aad qorsheyneyso farriin gaar ah oo ku saabsan macaamiisha ay khuseyso.
Feb 1, 2016 markay ahayd 9:10 PM
Waxaan aqoonsaday arrinta anigoo adeegsanaya Webmasters-ka Google oo fiirinaya tirakoobkayaga gurguurta, Tolga. Anigu ma aaminsani inay yihiin dhammaan macaamiishooda, waxaan u maleynayaa inaan ku xirnay qaar ka mid ah server-yada gaabiska ah oo culeys badan saaran yahay. Haddii aadan arkin hoos u dhac ku yimaadda waxqabadka, malaha sabab aad uga tagto ma jirto. Flywheel waa ka qaalisan yahay xulashooyinkayaga xisaabta badan, ma hubo laakiin waad badbaadin kartaa xoogaa lacag ah.
Febraayo 2, 2016 saacadu markay tahay 10: 16 AM
Taageere weyn oo Flywheel ah, Doug. U isticmaalay in ka badan hal sano.
Feb 2, 2016 markay ahayd 5:10 PM
Ma rumaysan karo sida ay qunyar u socodsiisay degmadu, iyo inay ku siin kari waayeen jawaab toos ah. Waan ku faraxsanahay inaan maqlo waxyaabaha si fiican ayey ula shaqeynayaan Flywheel. Waxaan dhawaan u wareejinay martigelinta goobta Roundpeg sidoo kale, waxaanan leenahay jawi deggan oo deggen.
Runtii waxaan la halgamayaa inaan shirkadaha ku hoos tuuro basaska qoraaladan dadweynaha dhexdiisa. Shirkad kastaa waxay leedahay dad wanaagsan rajadayduna waxay tahay inaan kaliya ku qabtay bil xun.
Waxaan inbadan ka fikirayay arintan, adiguse miyaad ogtahay? Waad saxantahay Fadlan faallooyinka iga bixi. In kasta oo dhibaatooyinka aan haysano w / Flywheel, xitaa maalintoodii ugu xumeyd, haddana waxay garaaceen martida sida HostGator, GoDaddy, iwm.